पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मज्जा हुन्छ : रुक्मिणी सेढाई - Hamro Kalam
Home Bannernews पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मज्जा हुन्छ : रुक्मिणी सेढाई
रुक्मिणी सेढाईले जहाँ हात हाल्छिन् त्यहाँ सफलता पाएकै हुन्छिन् । निडर, कर्मठ र संघर्षले नै उनी आफू सफल भएको बताउँछिन् । जसले जुन क्षेत्रसँग संगत गरेको छ उसले उनलाई यही क्षेत्रको मात्र मान्छे होलिन् भन्ने बुझ्छ तर उनको बहुबिधा र उनको सक्रियता जान्ने मान्छेले भने उनको सबै क्षेत्रबारे जानकारी राखेका हुन्छन् र त्यो सक्रियतालाई पनि बुझ्छन् ।
उनी सानैदेखि अलिकति फरक चरित्र र गुण भएको व्यक्तिका रुपमा आफूलाई लिने गर्छिन् । नयाँ काम गर्ने र नयाँ ठाउँमा गएर केही सिकौं भन्ने चाहनाले नै उनलाई बाल्यकालमा धेरैवटा विद्यालय चहार्न वाध्य बनायो । उनी राजनीति, व्यापार, समाजसेवा र धार्मिक क्षेत्रमा पनि सफल छिन् । अचम्मको कुरा त के छ भने उनी अहिले जहाँ पदाधिकारी भएर भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् त्यहाँ पुरुषसँग नै प्रतिस्पर्धा गरेकी हुन् ।
उनी आफूँसँग आँट भएकाले जोसुकैसँग पनि संघर्ष र प्रतिस्पर्धा गर्न पछि नपर्ने बताउँछिन् । चाहना व्यापार संघकी उपाध्यक्ष, नेपाल व्यापार संघकी प्रथम सचिव र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघकी उपाध्यक्ष रुक्मिणी जुनसुकै कुरा पनि तत्काल होस् भन्छिन् यसको अर्थ ‘शुभकार्यमा ढिलो गर्नु हुँदैन’ भन्ने नै हो । उनी नेपाल व्यापार संघ र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघकी महिला विभाग प्रमुख हुन् । व्यवसायी महासंघमा १८ वटा व्यापार व्यवसायी संस्था आवद्व छन् । उनले गत जेष्ठ, भाद्र र फागुनमा नै ३ वटा निर्वाचन धानेकी थिइन् । नेतृत्वमा जान सजिलो नहुने अनेकन गुट–उपगुटको शिकार हुनुपर्ने बुझेकी उनलाई नेतृत्व लिएर केही गरौं भन्ने भाव जागिरहेको हुन्छ । आफूसँग समय कम छ भन्ने थाहा छ तरपनि जिम्मेवारी आइलागे पछि हटेकी छैनन् ।
आफ्नो चाहनाले भन्दा पनि उनी अरुको बढी दबाबले नेतृत्वमा पुगेकी छिन् । तर जहाँ जुन पदमा बसेपनि आफूलाई अब्बल बनाएरै छोडेकी हुन्छिन् । अरुलाई झुक्याएर सीमित फाइदा लिने सोच उनमा नभएकाले जे बोले पनि सत्य कुरा गर्ने र अरुबाट पनि आफ्नो जस्तो राम्रो व्यवहारको अपेक्षा गर्छिन् । चाहना व्यापार संघ भोटाहिटीकी उपाध्यक्ष रुक्मिणी सेढाइले व्यापारीको हकहितको लागि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको बताएकी छिन् । उनी नेपाल हिमालय सिमापार व्यापार संघको पनि साधारण सदस्य हुन् । उनले महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रबादी धारका उम्मेदवार बच्चु पौडेललाई खुलेरै सघाइन् ।
उनले व्यवसायीको पक्षमा लागिरहँदा धेरै समस्याहरु भेल्नुपरेको बताइन् । १६ वर्ष अघिदेखि बीर अस्पताल अघि व्यापार गर्दै आएकी उनले टेण्डर पार्न पनि निकै ठूलो दुःख गर्नुपरेको बताइन् । ‘ प्रत्येक ३ वर्षमा टेण्डर हुन्छ त्यो बेला को –को कस्ता मान्छे आउँछन् त्यसको कुरा गरेर साध्य छैन ’ उनले भनिन् ‘ विभिन्न व्यक्तिले फोन गरेर टेण्डर नलिन भनेर धम्क्याउँथे तर पनि आफ्नो अडान छोडेनौं ।’ बैशाख २० गतेबाट बीर अस्पतालको जग्गामा रहेका ७ वटा सटर तत्कालको लागि खाली गरिएको छ । उनीहरुले एकै दिनबाट व्यवसाय सुरु गरेका थिए । सँगै रहेको खाली जग्गामा सुविधासम्पन्न भवन बनाइँदै गरेकाले यी सटरलाई समेत असर पर्ने भनेर सटर बन्द गरिएको छ । ‘ विकास भएपछि हाम्रो पनि व्यापार राम्रो होला भन्ने लागेको छ, फेरि पनि हामीलाई त्यही ठाउँमा बस्न दिने भनिएको छ ’ सेढाइले भनिन् ‘ अहिले त हाम्रो विजोग नै भएको छ, गोदाममा बसेर व्यापार गरेका छौं तर सामूहिक एकता कायम राखेका छौं ।’ सँगै रहेका ७ वटा सटरको पनि अलग–अलग दर थियो । उनले आफ्नो सटरको भाडा सस्तो भएपनि अरु महंगो मूल्य तिरिरहेकाको सजिलाको लागि आन्दोलन गरेर भाडा दरमा एकरुपता कायम गरेको र थोरै भएपनि घटाएको बताइन् । यहाँ ९० भन्दा बढी व्यापारी रहेका छन् ।
यो व्यापार संघले सधैं फाइदा र नाफामात्र नहेरी सामाजिक काममा पनि समय खर्चेको र सहयोग गरेको जनाएको छ । तीन वर्षअघि नेपालमा गएको पहिरो, त्योभन्दा अघि सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोमा परी घाइते भएका मानिसका लागि उद्वार र राहतका कार्यक्रम गरेर पीडितलाई सहयोग गरेको बताइन् । अस्थिर सरकार र सरकारको फेरिइरहने नीति नियमले व्यापारी मर्कामा परेको भन्दै उनले सरकार र सरोकारवालाई त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेकी छिन् । सरकारले व्यवसायीबाट करमात्र लिने तर सेवा सुविधा नदिने गरेकामा उनलार्य चिन्ता लागेको छ । उनी विशेष गरी महिलाको पक्षमा लाग्छिन्, महिलालाई सक्षम बनाएर समाजको बिकास छिट्टै गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेकी उनले महिलाको विपक्षमा लाग्ने महिला नै हुन्छन् भन्ने गुनासोको अन्त्य हुनुपर्छ भन्छिन् ।
२०३३ साल मंसीर १२ गते नुवाकोटको सूर्यमति गाउँ बिकास समितिमा पिता भूगेन्द्र र माता ईश्वरीको कोखबाट जन्मेकी उनी ५ वर्षसम्म मावल नै बसेर पढिन् । उनले सूर्यमती प्रावि (अहिले मावि), निरन्जन मावि, महेन्द्र मावि, भीमसेन प्रावि, श्री शान्ति मावि पढिन् । उनले चुहाडी पव्लिक माविबाट एस्एल्सी पास गरिन् ।
नयाँ कुरा सिक्ने र जान्ने रहर भएकाले नै रहेछ उनी सधैंजसो विद्यालय परिवर्तन गरिरहन्थिन् , मावल नै बसेर पढेकी उनी घरबाट निस्कँदा भने आफ्नै विद्यालय जान भनेर हिँड्ने गर्थिन् । राम्रो पक्ष के थियो भने पढ्न जहाँ पढे पनि परीक्षा दिन भने भर्ना भएको विद्यालयमा नै आउँथिन् । जति विद्यालय पढिन् त्यहाँका साथीहरुसँग अझै पनि राम्रो सम्वन्ध छ । उनी सबैजसो विद्यालयमा गएर अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिने गर्थिन् । उनले नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पस बट्टारमा एक वर्ष आइकम पढिन् त्यसपछि काठमाडौंको लैनचौर क्याम्पस पढिन् । आइकम पढेसँगै साइकोलोजीको कक्षा पनि लिइन् शिक्षक नन्दराज आचार्यसँग, त्यो पनि पास गरिन् ।
२०४६ साल फागुन ४ गते उनी नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा लागिन् । उनलाई बासु अधिकारीले सदस्यता दिएका थिए । मामा राजाराम सिलवालसँगै राजनीति गर्न थालिन्, रातभर मामा–भान्जीको सल्लाहमा नै भोलिपल्टका कार्यक्रम हुने गर्दथे । भाषण गर्न मन पराउने उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अतिथि भएको कार्यक्रममा सरकारलाई ‘प्रतिगामी तत्व’ भनिदिएपछि झण्डै पक्राउ खानुपरेको थियो । सुरुमा सिडिओले पक्राउ गर्ने आदेश दिएपनि उनी झन् कडा शव्दमा बोलिरहिन् अन्त्यमा उनको भाषणकलाकै जित भयो । उनले त्रिभुवन त्रिशुली, चुहाडी माविमा नेविसंघको संगठन गरिन् ।
एकपटक पक्राउ परेर प्रहरीले लाँदा उनलाई प्रहरी कार्यालय पु¥याउनुभन्दा अघि नै अर्जुननरसिंह केसी प्रहरी कार्यालय पुगेर छुटाएको सम्झना ताजा छ । वाल्यकालमा धेरै सक्रिय भएपनि पछिल्लो समयमा व्यापार व्यवसायका कारण राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेकी उनी समयले आवश्यक ठानेमा सक्रिय बन्ने सोचमा छिन् ।
उनी नुवाकोटलाई कांग्रेसका धेरै नेताहरु भएको ठाउँ मान्छिन् । तर बेलामौका देखिने समस्या र गुटगत द्वन्द्वचाँहि उनलाई चित्त बुझेको छैन । डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बहादुर सिंह लामा तामाङ, जगदीश्वरनसिंह केसी, रमेशकुमार महत नुवाकोटका चर्चित नेताहरु हुन् ।
उनी नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघको जिल्ला सदस्य हुन् । समय मिले आफ्नै गाउँमा गएर राजनीति गर्ने सोच छ उनको तर कसैको आड भरोसा र कसैले नेता बनाइदिएको भरमा उनलाई नेता हुन मन छैन । उनी गुटको नेता भएर राजनीति गर्न चाहन्नन् ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिप्रति जनताको हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएकोमा उनलाई चिन्ता छ । राजनीति समाजसेवा हो भन्ने भाव जगाउन उनी पहल गर्ने बताउँछिन् । ‘राजनीति व्यापारजस्तै भएको छ तर म यसो गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन ’ उनले भनिन् ‘ अहिलेसम्म कसैको पनि अहित गरेको छैन, थप केह ीगर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच छ राजनीतिमा लागेर सक्रिय भएपछि ।’ अहिलेको राजनीति खर्चिलो र महंगो भएकाले सबैभन्दा पहिले आफू सक्षम हुनुपर्छ भन्ने उनको प्रष्ट विचार छ ।
जुनसुकै निर्वाचनमा पनि पार्टीले टिकट दिँदा योग्य र सक्षम व्यक्ति पाखा लागेकामा उनलाई चिन्ता छ । ‘यो र त्यो गुट भन्ने अन्त्य हुनु जरुरी छ । सबैले मेरो कांग्रेस भन्ने दिन आउनुपर्छ ’ उनले भनिन् ‘ निर्वाचनमा पराजय भएपछि कांग्रेसलाई गाउँगाउँमा गएर संगठन गर्ने राम्रो अवसर मिलेको छ यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’नेविसंघको राजनीति गर्दा उनलाई एमालेकी बिन्दा पाण्डेले धेरै दुःख दिइन्, उनलाई संगठन जाँदा पनि बाटो छेक्ने र अनेक अवरोध गर्ने काम भयो त्यो दिन अझैपनि सम्झेकी छिन् रुक्मिणीले । बिन्दा एमालेको संगठन बनाउन हिँडेकी थिइन् । उनी अहिले पनि तत्कालीन एमालेको तर्फबाट समानुपातिक प्रतिनिधि सभाकी सांसद् छिन् ।
२०५१ साल असार २८ गते माधवप्रसाद पाण्डेसँग बिबाह गरेकी उनले सुरुमा घरपरिवार चलाउन र धान्न केही दुःख गर्नैप¥यो तर निरन्तर संघर्ष र मिहनेतले बिस्तारै सफल बन्दै गइन् । उनी पहिले केही समस्या भएको भन्न अप्ठेरो मान्दिनन् । बिबाह ‘मागी कि भागी’ भन्ने विषयमा धेरै बोल्न चाहिनन्, बिबाह स्वभाविक प्रक्रिया भएकाले यसमा धेरै टिप्पणी गर्दिनन् ।
जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि श्रीमानसँग सल्लाह गर्ने उनी सफल भएको दावी गर्छिन् । १ वर्षमै छोरो पाएकी थिइन् । असार ३२ गते छोरो पाएकी उनले ५ दिनमै आइकमको परीक्षा दिइन् तर पनि पास भइन् ।
उनले शिक्षाको मात्र नभई समाजसेवाको क्षेत्रमा पनि आफूलाई स्थापित गरेकी छिन् । घरमा गलैंचा घुमाउन ल्याएकी एक महिलाले दुःख गरेर छोरो च्यापेको देखेपछि उनको मन रोयो, उनले ती महिलालाई ‘अब यसरी नानी च्यापेर नहिँड्न र त्यसको लागि शिक्षामा आफूले सहयोग गर्ने बताइन् । हुम्लाका ती बालक अहिले क्याम्पस पढ्ने भएका छन्, केही अघिसम्म उनले सम्पूर्ण पढाई खर्च र सामाग्री व्यवहोरेकी थिइन् ।
उनले माइजु सान्नानी सिलवालको नाममा बट्टार आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा अक्षय कोष स्थापना गरेकी छिन्, जेहेन्दार र लगनशील उत्कृष्ठ विद्यार्थीले यो कोष पाउने छ । दादुराको कारण निधन भएका भाई कोषराजको नाममा पनि अक्षय कोष स्थापना गर्ने तयारी छ । उनले गोंगबुको सन्तोषीमाताको मन्दिर २०५७ सालमा निर्माण गरेकी छिन् ।
बिहान सधैं ४ बजे उठ्ने उनी पुजाआजा गर्छिन् । बिहानको खाना पकाएर खाएर र खुवाएर सधैैं उनी व्यापारमा आउँछिन् । व्यापारबाट थोरै उब्रिएको समय समाजसेवामा लाउँछिन् जुन कामले एकातिर उनको घरजीविका पनि चलेको छ भने अर्कातिर नाम र इज्जत पनि कमाएकी छिन् ।
उनी जिवनमा इमान्दार भएर संघर्ष गर्ने बताउँछिन् । नेतृत्वमा गएपछि समय थोरै होला कि भनेर कतिपय ठाउँमा सहभागी हुन वा जिम्मेवारीमा नबस्न खोज्छिन् तर पनि उनको सिप र क्षमता बुझेकाले उनलाई राखिहाल्छन् । उनी सबै पार्टी र पक्षको सम्मान गर्छिन्, विपक्षीप्रति उनको राम्रो सद्भाव छ । विपक्षी नै भएनन् भने कुनै पनि प्रगति गर्न सकिँदैन भन्ने उनी पक्षधरभन्दा विपक्षीको सम्मान बढी गर्छिन् ।
एनआएन यूरोप क्षेत्रीय सम्मेलन : एनआरएन संरक्षक राम प्रताप थापाको संयोजकत्वमा सीप तथा प्रबिधि हस्तान्तरण सेसन तयारी समिति गठन